Etiti ụwa: onyinyo nke Mordor GOTY, na mbelata 50% maka obere oge | Esi m mac
Middle-ụwa: onyinyo nke Mordor GOTY, 50% kwụsịrị maka obere oge
Egwuregwu Middle-ụwa: Onyinyo nke Mordor GOTY nke na-abịa na Spanish: Middle-Earth: Onyunyo nke Mordor GOTY, dị na ego dị oke ọnụ na Mac App Store. Na nke a anyị na-ekwu maka ya 50% kwụsịrị ọnụahịa oge nke egwuregwu Mac.
Egwuregwu a ruru Mac App Store n'afọ gara aga na mbelata 50% na ọnụahịa mbụ ya yana oge ọ gbanwere na na 49,99 euro nke bụ n'ezie ya price. Ugbu a, anyị nwere ike ịnweta egwuregwu a maka ọkara ọnụahịa nke euro 24,99.
Na nkọwa Ha na-atụ aro ka anyị gụọ opekempe achọrọ tupu ịmalite ịzụta ya Ma ọ bụ otu n'ime egwuregwu ndị ahụ chọrọ nnukwu ohere disk na mgbakwunye na nke ahụ, dịrị na OS X 10.10.3 ma ọ bụ karịa, ihe nhazi 2,4 GHz ma ọ bụ karịa, 8GB RAM na ihe ngosi 1 GB ma ọ bụ karịa.
Nke a bụ nkọwa nke egwuregwu:
N’etiti ụwa: onyinyo nke Mordor Game nke Year Edition, ndị egwuregwu ghọrọ Talion, Gordorian Ranger nke Black Gate nke e gburu ya na ezinụlọ ya n’abalị nke nlọghachi Sauron na Mordor. N'ịbụ onye laghachiri na ndụ ma jikọrọ ya na mmụọ Spectral, Talion malitere ozi nke ịbọ ọbọ na nchọta iji chọta azịza nke ihe mere eji jụ ya udo nke ọnwụ. Ndị na-egwu egwu ga-ekpughe ihe omimi dị n'azụ mmụọ na-achịkwa na mmalite nke Mgbaaka nke Ike, ma chee ihu na Nemesis ha.
Kedu otu esi eme na oge niile nke ngwa n'efu ma ọ bụ belata maka obere oge, anyị kpamkpam amaghị ụbọchị ole ngwa a ga-ebelata, yabụ ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị nwere mmasị ịnwe ya na Mac gị, egbula oge ibudata ya ogologo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Middle-ụwa: onyinyo nke Mordor GOTY, 50% kwụsịrị maka obere oge
New Trojan Na-adighi Ngwaọrụ Jailbroken iOS na China
IPhone 7 ọ ga - enwe ikike nke 256 GB?